ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးပင်ဆိုပြီး ဖတ်လိုက်ရလို့ – Daily News
June 30, 2021 - by admm
အန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနယ်စပ်တွင် ကိုဗစ် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူများမှ ကျေးလက် မဖွံ့ဖြိုးသော အရပ်များရှိ ဝေဒနာ ခံစားနေရသော ကိုဗစ် ကူးစက်လူနာအချို့မှာ အောက်စီဂျင်ကို သုံးကာအသက်ကြိုးစားရှူနေရသူများမှ အောက်စီဂျင်ဘူးထပ်မရတော့ဘဲ အောက်စီဂျင်ပြတ်သွားခဲ့ချိန်တွင်ဖော်ပြပါ ဆေးရွက်ကို အရွက်၊ အရိုး၊အမြစ် [ပင်စ ငါးပါးကို]ကျိုပြီး သောက်ကြ၊ အရွက် များ၊ အရိုးများပြုပ်ထားသည်ကိုလည်း ဝါးစားခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။
တညအိပ်ပြီး နောက်ရက်၌အောက်စီဂျင် မပါလည်း အသက်ကောင်းစွာရှူနိုင် ကြကာ ရောဂါဝေဒနာ မှာသိသိ သာသာ သက်သာသွားကြသည့်အတွက် လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ချင်းပြည်နယ် ရီခေါဒါမြို့အနီးတွင် ၄င်းဆေးရွက်များ အလေ့ကျပေါက်နေသည်ဖြစ်၍ သွားရောက်ခူးကြသူများစွာရှိနေကြောင်း နှင့် ကလေးမြို့သို့လည်း ကုန်တင်ကားများဖြင့် ပို့ပေးကြကာ လက်ရှိ ကလေးမြို့နယ်ရှိ ဒေသခံအချို့မှ ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်ခံရသည့် လူနာများစွာတို့မှာ မိမိတို့နေအိမ်၌ သီးသန့်နေထိုင်ကြရပြီး မိသားစု၏ ပြုစုခြင်းကိုခံယူနေရသူများကို မိသားစုဆွေမျိုးသားခြင်းများမှ ဖော်ပြပါ ဆေးရွက်များကို ယနေ့ ကလေးမြို့တွင် သွားရောက်ရယူကြကာ ဝေဒနာရှင်တို့ကို တိုက်ကျွေးခဲ့ရာ သိသာစွာ ဝေဒနာသက်သာခဲ့ကြကြောင်း ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်မိသားစုဝင်များ၏ ပြန်လည်ပြောပြခြင်းကို သိရှိခဲ့ရပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် ၄င်းဆေးရွက်ပုံများကို အနီးအဝေးအမြင်အမျိုးမျိုးဖြင့်၊ အရွက် အကြီးသေး ပုံများကိုပါ ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါသည်။မိမိတို့ ပတ်ဝန်းကျင်၌ တွေ့ရှိပါက ဖြစ်စေ၊ မိဘ၊ ဘိုးဘွားများကိုပြသပြီး အနီးနား၌ ၄င်းဆေးရွက်ပေါက် ရောက်ခြင်း ရှိ မရှိ စုံစမ်းအသုံးပြုကြည့်လိုက အဆင်ပြေမှုဖြစ်စေရေးရည်ရွယ်ဖော်ပြလိုက်ရသကဲ့သို့ ရောဂါပိုး မရှိသူတွေကလည်း ၄င်းဆေးရွက်ကို ကိုဗစ် ၁၉ ကာကွယ် စေခြင်းအလှိူ့ငှာ ရောဂါပိုးမရှိသူများလည်း ကာကွယ်သည့် သဘောဖြင့် သောက်သုံးနေကြကြောင်း ယနေ့ညနေပိုင်း၌ သိရှိရ၍ ပြန်လည်၍ မျှဝေဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။
L2 (LSO)ပြင်ဦးလွင်ဈေးလေး၊မန္တလေး တရုပ်တန်းဈေး၊ကျောက်မဲဈေး ရန်ကုန်တရုတ်တန်းဈေးတွေမှာဝယ်ယူလို့ရနိုင်ပါတယ်။
[Credit . မူရင်းရေးသားတင်ပြသူကို ဘယ်သူမှန်းအတိအကျမသိပါ။ခရက်ဒစ်ပါ။ တစ်ဆင့်#Phyu Hnin]
မှတ်ချက်။ ။ဒီပို့စ်ပါ ဆေးပင်ဆေးရွက်အကြောင်းကို သိသူများကလည်း မန့်ပြီးအကြံပေးစေချင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် ကလေးမြို့မှမိတ်ဆွေများ သိသလောက်ပြန်ပြောပြပြီးကုသိုလ်ယူစေချင်ပါတယ်။
အန်ဒိယနိုငျငံနှငျ့ မွနျမာနယျစပျတှငျ ကိုဗဈ ရောဂါပိုးကူးစကျခံရသူမြားမှ ကြေးလကျ မဖှံ့ဖွိုးသော အရပျမြားရှိ ဝဒေနာ ခံစားနရေသော ကိုဗဈ ကူးစကျလူနာအခြို့မှာ အောကျစီဂငျြကို သုံးကာအသကျကွိုးစားရှူနရေသူမြားမှ အောကျစီဂငျြဘူးထပျမရတော့ဘဲ အောကျစီဂငျြပွတျသှားခဲ့ခြိနျတှငျဖျောပွပါ ဆေးရှကျကို အရှကျ၊ အရိုး၊အမွဈ [ပငျစ ငါးပါးကို]ကြိုပွီး သောကျကွ၊ အရှကျ မြား၊ အရိုးမြားပွုပျထားသညျကိုလညျး ဝါးစားခဲ့ကွသညျဟု သိရသညျ။
တညအိပျပွီး နောကျရကျ၌အောကျစီဂငျြ မပါလညျး အသကျကောငျးစှာရှူနိုငျ ကွကာ ရောဂါဝဒေနာ မှာသိသိ သာသာ သကျသာသှားကွသညျ့အတှကျ လကျရှိ မွနျမာနိုငျငံ ခငျြးပွညျနယျ ရီခေါဒါမွို့အနီးတှငျ ၄ငျးဆေးရှကျမြား အလကေ့ပြေါကျနသေညျဖွဈ၍ သှားရောကျခူးကွသူမြားစှာရှိနကွေောငျး နှငျ့ ကလေးမွို့သို့လညျး ကုနျတငျကားမြားဖွငျ့ ပို့ပေးကွကာ လကျရှိ ကလေးမွို့နယျရှိ ဒသေခံအခြို့မှ ကိုဗဈ ၁၉ ကူးစကျခံရသညျ့ လူနာမြားစှာတို့မှာ မိမိတို့နအေိမျ၌ သီးသနျ့နထေိုငျကွရပွီး မိသားစု၏ ပွုစုခွငျးကိုခံယူနရေသူမြားကို မိသားစုဆှမြေိုးသားခွငျးမြားမှ ဖျောပွပါ ဆေးရှကျမြားကို ယနေ့ ကလေးမွို့တှငျ သှားရောကျရယူကွကာ ဝဒေနာရှငျတို့ကို တိုကျကြှေးခဲ့ရာ သိသာစှာ ဝဒေနာသကျသာခဲ့ကွကွောငျး ဝမျးမွောကျစှာဖွငျ့မိသားစုဝငျမြား၏ ပွနျလညျပွောပွခွငျးကို သိရှိခဲ့ရပါသညျ။
ထို့အတှကျကွောငျ့ ၄ငျးဆေးရှကျပုံမြားကို အနီးအဝေးအမွငျအမြိုးမြိုးဖွငျ့၊ အရှကျ အကွီးသေး ပုံမြားကိုပါ ဖျောပွပေးလိုကျရပါသညျ။မိမိတို့ ပတျဝနျးကငျြ၌ တှရှေိ့ပါက ဖွဈစေ၊ မိဘ၊ ဘိုးဘှားမြားကိုပွသပွီး အနီးနား၌ ၄ငျးဆေးရှကျပေါကျ ရောကျခွငျး ရှိ မရှိ စုံစမျးအသုံးပွုကွညျ့လိုက အဆငျပွမှေုဖွဈစရေေးရညျရှယျဖျောပွလိုကျရသကဲ့သို့ ရောဂါပိုး မရှိသူတှကေလညျး ၄ငျးဆေးရှကျကို ကိုဗဈ ၁၉ ကာကှယျ စခွေငျးအလှိူ့ငှာ ရောဂါပိုးမရှိသူမြားလညျး ကာကှယျသညျ့ သဘောဖွငျ့ သောကျသုံးနကွေကွောငျး ယနညေ့နပေိုငျး၌ သိရှိရ၍ ပွနျလညျ၍ မြှဝဖေျောပွလိုကျရပါသညျ။
L2 (LSO)ပွငျဦးလှငျစြေးလေး၊မန်တလေး တရုပျတနျးစြေး၊ကြောကျမဲစြေး ရနျကုနျတရုတျတနျးဈေးတှမှောဝယျယူလို့ရနိုငျပါတယျ။
[Credit . မူရငျးရေးသားတငျပွသူကို ဘယျသူမှနျးအတိအကမြသိပါ။ခရကျဒဈပါ။ တဈဆငျ့#Phyu Hnin]
မှတျခကျြ။ ။ဒီပို့ဈပါ ဆေးပငျဆေးရှကျအကွောငျးကို သိသူမြားကလညျး မနျ့ပွီးအကွံပေးစခေငျြပါတယျ။အထူးသဖွငျ့ ကလေးမွို့မှမိတျဆှမြေား သိသလောကျပွနျပွောပွပွီးကုသိုလျယူစခေငျြပါတယျ။
နေ့စဉ်သောက်နေတဲ့ ၁၀၀ တန် ကော်ဖီမစ်ထုပ်ကို ကော်ဖီမှုန့်အစစ်နဲ့ လုပ်တယ်လို့ ထင်နေကြတုန်းပဲလား
မြန်မာပြည်မြေပုံကို ပထမဆုံး ရေးဆွဲသူ ဒေါက်တာဒေါ်သင်းကြည် ( မြန်မာအမျိုးသမီးများထဲမှ နိုင်ငံရပ်ခြား ပါရဂူဘွဲ့ကို ပထမဦးဆုံး ဆြတ္ခူးခဲ့သူ)
Previous Article ပုဒ်မ ၅၀၅ က ဖြင့် အမှုဖွင့် ခံခဲ့ရပြီး ယခု ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ကြောင်း ကြေညာထုတ်ပြန်လိုက်သော အနုပညာရှင် (၂၄) ဦးရဲ့ အမည်စာရင်း
Next Article သုံးရက်လောက်ပျောက်သွားပြီးမှနောက်ဆုံး အိမ်ကိုအကြွေးစာရင်းနဲ့ပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့ ကြောင်လေး
ငါးပူတင်းကို မစားဖူးလို့ချက်စားကြည့်ရာကနေ အစာအဆိပ်သင့်ကာ အသက်ဆုံးပါးသြားခဲ့ရတဲ့ မိသားစုဝင်သုံးဦး
နာဆာရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေအရ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင် ဇွန်းတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် သက်ရှိများရှိနိုင်ခဲ့ဟုဆို
သူ့ခြံထဲက သရက်သီးခူးလို့ဆိုပြီး အသက် ၈၀ အရွယ်အဘိုးကို မညှာမတာဖြင့် ထောင်ထဲပို့ခဲ့တဲ့ အကြင်နာတရားမဲ့သော ခြံပိုင်ရှင်တစ်ဦး
များမကြာမှီမှာ VPNအသုံးပြုပါက ထောင်ဒဏ်(၃)နှစ်အထိအပြစ်ပေးအရေးယူခြင်းခံရတော့မည်
အဖေ့ ဘာသာ ရှာစား သမီးတို့ မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုလို့ တလမ်းဝင် တလမ်းထွက် ဖျာရောင်းနေရတဲ့ အဖိုး